Single/ FA တို့ဆော့သင့်တဲ့ Couple တိုက်ဖျက်ရေးဂိမ်း (リア充撲滅RUN) – DigitalTimes.com.mm
377 Shares 95 Views
Single/ FA တို့ဆော့သင့်တဲ့ Couple တိုက်ဖျက်ရေးဂိမ်း (リア充撲滅RUN)
ဒီတစ်ပတ် TGIF ကတော့ Single တွေ FA တွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်စရာပိတ်ရက်လို့ပဲပြောရမလား?? couple ဆိုရင်ကို မျက်စိစပါးမွေးစူးတဲ့ (တချို့သော) Single/ FA တို့အတွက် ဂိမ်းလေးတစ်ခုရှာတွေ့ထားတယ်နော်…(စုံပလုံစီအောင်မွှေနှောက်ရှာဖို့အားထုတ်ခဲ့ရလို့ admin ကိုအကျင့်ပုပ်တယ်မမြင်စေချင်ပါ )
သူများတွေလို ပိတ်ရက်အတူတူထွက်လည်စရာလူလည်းမရှိမယ့်အတူတူ အိမ်မှာပဲပျော်ပျော်နေပြီး ဆော့ရအောင် ဒီ リア充撲滅RUN ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ Goodia Inc ကနေဖန်တီးထားတာဖြစ်လို့ ဂျပန်ဘာသာကလွဲရင် ကျန်တဲ့ဘာသာစကားတွေကို ထောက်ပံ့မပေးနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်လိုမဖတ်တတ်လည်း ကိစ္စမရှိလောက်အောင်ကို ဆော့ရလွယ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ အပြင်မှာမဟုတ်ဘဲဂိမ်းထဲမှာလိုက်ဖျက်တာဆိုတော့ ငရဲမကြီးဘူးတော့ထင်ပါတယ်။ အပြင်မှာပါ လိုက်ဖျက်ရင်တော့ အရိုက်ခံရမှာပါ 
နာမည်ကတော့ “Couple Destroying Run” လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီး တောက်လျှောက်ပြေးရတဲ့ဂိမ်းမျိုးပါ။ လမ်းမှာသွားနေတဲ့အတွဲတွေကို ကြားထဲကဝင်ဖျက်ပြီး ကွဲအောင်လုပ်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သေချာချိန်မပြေးနိုင်ဘဲ တိုက်ရိုက်တိုက်မိရင်တော့ ကိုယ်ပဲလဲကျပြီး game over ဖြစ်သွားမှာပါ။ အတွဲများများဖြတ်နိုင်လေ point များများရလေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖျက်ချင်ဇောတွေများပြီး လမ်းမှာရှိတဲ့ခလုတ်တွေကို မမြင်မိရင်လည်း တိုက်မိပြီး game over ဖြစ်မှာပါ။
စဆော့မယ်ဆိုရင် ပုံမှာပြထားတဲ့ထောင့်၎ကွက်ထဲက အဝါရောင်နဲ့ကွက်ပြထားတဲ့အကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ( ゲーム スタート = “Game Start”)
ဒီဂိမ်းက စွဲလည်းစွဲ နာမည်လည်းအရမ်းကြီးခဲ့ ကြီးနေဆဲ ဂိမ်းတစ်ခုပါပဲ။ အပျော်ဆော့ဖို့ဂိမ်းတစ်ခုပေမယ့်လည်း skill နည်းနည်းတော့လိုပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာပဲ ကိုယ့်ထဲကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ranking ယှဉ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် FA တွေထဲမှာ ဘယ်သူက skill အဂျွတ်ဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်ဦးမှာပါ။
တိုက်ရခိုက်ရတဲ့ဂိမ်းတွေဆော့ရတာလည်းပျင်းလာပြီ အပျော်ဆော့ဖို့ဂိမ်းတစ်ခုခုဆော့ချင်တယ် အထူးသဖြင့် FA တွေဆိုရင်တော့ ဒီဂိမ်းလေးက အကြိုက်တွေ့နိုင်စေလောက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း….
(အခုပဲ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း FA/ Single တွေကို မန်းရှင်းခေါ်ပေးလိုက်ပါ)
Android —> Download
Source : GooglePlay,1Phut
ဒီတဈပတျ TGIF ကတော့ Single တှေ FA တှအေတှကျ စိတျကနြေပျစရာပိတျရကျလို့ပဲပွောရမလား?? couple ဆိုရငျကို မကျြစိစပါးမှေးစူးတဲ့ (တခြို့သော) Single/ FA တို့အတှကျ ဂိမျးလေးတဈခုရှာတှထေ့ားတယျနျော…(စုံပလုံစီအောငျမှနှေောကျရှာဖို့အားထုတျခဲ့ရလို့ admin ကိုအကငျြ့ပုပျတယျမမွငျစခေငျြပါ )
သူမြားတှလေို ပိတျရကျအတူတူထှကျလညျစရာလူလညျးမရှိမယျ့အတူတူ အိမျမှာပဲပြျောပြျောနပွေီး ဆော့ရအောငျ ဒီ リア充撲滅RUN ဆိုတဲ့ဂိမျးလေးကိုမိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံ Goodia Inc ကနဖေနျတီးထားတာဖွဈလို့ ဂပြနျဘာသာကလှဲရငျ ကနျြတဲ့ဘာသာစကားတှကေို ထောကျပံ့မပေးနိုငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဂပြနျလိုမဖတျတတျလညျး ကိစ်စမရှိလောကျအောငျကို ဆော့ရလှယျတဲ့ဂိမျးတဈခုပါ။ အပွငျမှာမဟုတျဘဲဂိမျးထဲမှာလိုကျဖကျြတာဆိုတော့ ငရဲမကွီးဘူးတော့ထငျပါတယျ။ အပွငျမှာပါ လိုကျဖကျြရငျတော့ အရိုကျခံရမှာပါ 
နာမညျကတော့ “Couple Destroying Run” လို့အဓိပ်ပာယျရပွီး တောကျလြှောကျပွေးရတဲ့ဂိမျးမြိုးပါ။ လမျးမှာသှားနတေဲ့အတှဲတှကေို ကွားထဲကဝငျဖကျြပွီး ကှဲအောငျလုပျရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ သခြောခြိနျမပွေးနိုငျဘဲ တိုကျရိုကျတိုကျမိရငျတော့ ကိုယျပဲလဲကပြွီး game over ဖွဈသှားမှာပါ။ အတှဲမြားမြားဖွတျနိုငျလေ point မြားမြားရလပေါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဖကျြခငျြဇောတှမြေားပွီး လမျးမှာရှိတဲ့ခလုတျတှကေို မမွငျမိရငျလညျး တိုကျမိပွီး game over ဖွဈမှာပါ။
စဆော့မယျဆိုရငျ ပုံမှာပွထားတဲ့ထောငျ့၎ကှကျထဲက အဝါရောငျနဲ့ကှကျပွထားတဲ့အကှကျလေးကိုနှိပျလိုကျပါ။ ( ゲーム スタート = “Game Start”)
ဒီဂိမျးက စှဲလညျးစှဲ နာမညျလညျးအရမျးကွီးခဲ့ ကွီးနဆေဲ ဂိမျးတဈခုပါပဲ။ အပြျောဆော့ဖို့ဂိမျးတဈခုပမေယျ့လညျး skill နညျးနညျးတော့လိုပါတယျ။ ဒီဂိမျးထဲမှာပဲ ကိုယျ့ထဲကသူငယျခငျြးတှနေဲ့ ranking ယှဉျလို့ရအောငျလုပျပေးထားတဲ့အတှကျ FA တှထေဲမှာ ဘယျသူက skill အဂြှတျဆုံးလဲဆိုတာကိုလညျးသိနိုငျဦးမှာပါ။
တိုကျရခိုကျရတဲ့ဂိမျးတှဆေော့ရတာလညျးပငျြးလာပွီ အပြျောဆော့ဖို့ဂိမျးတဈခုခုဆော့ခငျြတယျ အထူးသဖွငျ့ FA တှဆေိုရငျတော့ ဒီဂိမျးလေးက အကွိုကျတှနေို့ငျစလေောကျမယျလို့ မြှျောလငျ့ရငျး….
(အခုပဲ သငျ့ရဲ့ သူငယျခငျြး FA/ Single တှကေို မနျးရှငျးချေါပေးလိုကျပါ)
Dual Camera ပါတဲ့ BlackBerry Key2 ရဲ့ Teaser Video ထွက်ပေါ်လာ
MY TIME, MY FIFA WORLD CUP အမည်ရှိ ၂၀၁၈ ရုရှားဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား ကမ်ပိန်းကို ကြေညာလိုက်တဲ့ Vivo